Xoogagga Ciraaqiyiinta oo weeraray xarumihii u dambeeyey ee IS - BBC News Somali
Xoogagga Ciraaqiyiinta oo weeraray xarumihii u dambeeyey ee IS
26 Oktoobar 2017
Image caption Hawlgalka galbeedka Anbar wuxuu billowday dabayaaqadii Sitembar
Xoogagga ciraaqiyiinta ayaa qaaday duullaan ay dib ugu qabsanayaan halkii ugu dambaysay ee ay xoogga ku lahaayeen kooxda Dawladda Islaamiga ee dalka.
Askar, Boolis, rag ka tirsan qabaa'ilka Sunniyiinta iyo dagaallamayaal u badan shiico sida milateriga u tababaran ayaa ka qayb qaadanaya weerarka lagu qaaday al-Qaim iyo Rawa oo ku yaalla dooxada wabiga Furaat oo u dhow xudduudda Suuriya.
Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in mintidiinta IS "ay tahay inay kala doortaan dhimasho ama is dhiibid".
Jihaad-doonayaashu waxay weli gacanta ku hayaan qayb ka mid ah dooxada Furaat ee gobolka jaarka la ah ee Deir al-Zour oo ku yaalla Suuriya.
Hase yeeshee dhankaas waxaa cadaadis kaga haya xoogagga u janjeera xukuumadda Suuriya iyo isbahaysiga uu Maraykanku taageero ee isugu jira dagaallamayaasha Kurdiyiinta iyo Carabta ah ee dhawaan magaalada Raqqa ka qabsaday IS.
Arbacadii, ayaa dayaaradaha milateriga Ciraaq waxay warqado ku daadiyeen deegaankaas, ayagoo dadka u sheegayey in "ay galaan guryaha dushooda calammada cadcad ay suran yihiin marka ay xoogagga xorayntu soo galaan al-Qaim".
Lahaanshaha sawirka MELANY MARKHAM/NRC
Image caption In ka badan 10,000 oo barakacayaal ah ayaa soo gaaray bishan Ramadi.
Al Qaim waxay qiyaastii 315 KM waqooyi galbeed ka xigtaa Baqdaad,iyo Rawa, waxayna u dhow dahay magaalada xudduudda Suuriya ku taalla ee Abu Kamal oo muhiimad istaraatijiyadeed u leh IS, sababtoo ah waa marinka ay u soo maraan dagaallamayaasha, hubka iyo sahayda.
Hay'adda NRC waxay sheegtay in dad ka badan 10,000 oo barakacayaal ah ay soo gaarayeen xeryo u dhow Ramadi tan iyo billowgii Oktoobar.
Waxaa la rumaysan yahay in weli gobolka Anbar ay ku nool yihiin ilaa 75,000 oo qof, halka 65,000 ay ka qaxeen tan iyo Janaayo, kuwaasoo u badnaa carruur, dumar iyo dad waayeel ah.
Kaliya 62% qorshihii Qaramada Midoobay ay ugu tala gashay in looga jawaabo gargaarka bani aadminimo ee Ciraaq sannadkan 2017 ayaa dhaqaale loo helay.